११. रणनीति तथा कार्यनीति – नेपाल कानुन आयोग
११. रणनीति तथा कार्यनीति
वन नीतिको कार्यान्वयनको लागि देहाय बमोजिमका रणनीति र कार्यनीति अवलम्बन गरिने छ :
नीति १) दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्ने ।
(क) उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको सम्भाब्यता रहेका वन क्षेत्रको पहिचान गरी दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
(ख) वन क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ग) उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी वन क्षेत्र बाहिर वनको विस्तार तथा विकास गर्ने ।
(घ) कुल भू÷भागको कम्तिमा ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने ।
(१) वन क्षेत्रको तथ्याड्ढ आवधिक रुपमा अद्यावधिक गरी वनको वर्गीकरण गरिने छ ।
(२) सरकार तथा समुदायद्वारा व्यवस्थित वनमा सम्वद्र्धन प्रणालीमा (Silvicultural System) आधारित उपयुक्त कार्ययोजना बनाई व्यवस्थापन गरिने छ ।
(३) उपभोक्ता समूहको चाहना अनुसार एक आपसमा जोडिएका वा नजिकमा पर्ने समुदायमा आधारित वन क्षेत्रलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
(४) एक आपसमा जोडिएका वा सरकारद्वारा ब्यवस्थित नजिकमा पर्ने स–साना वनलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
(५) सामुदायिक, कवुलियती, साझेदारी, संरक्षित वन, मध्यवर्ती सामुदायिक, संरक्षित र धार्मिक लगायतका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको विकास र विस्तार गरिने छ ।
(६) वन पैदावारको सहज आपूर्ति तथा वितरणका लागि उपयुक्त संरचनाको निर्माण गरिने छ ।
(७) व्यवसायीकरण हुन सक्ने जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीको प्रविधि विकास गरी वन क्षेत्र भित्र र बाहिर विस्तार गरिने छ ।
(८) वन क्षेत्र लगायत सार्वजनिक र निजी जग्गामा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(९) शहरी क्षेत्रमा वन र उद्यानको विकास र विस्तार गरिने छ ।
(१०) भौतिक पूर्वाधार विकासलाई वातावरण मैत्री बनाउँदै आवास, सडक तथा नहर क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले वृक्षारोपण गरिने छ ।
(११) वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र व्यवस्थापन विषयमा कार्यमूलक अनुसन्धान गरी प्राप्त नतिजाको प्रसार र उपयोग गरिने छ ।
(१२) भिरालोपन र भू÷क्षयको संवेदनशीलताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न वन क्षेत्रको वर्गीकरण गरिने छ ।
(१३) कम प्रयोगमा रहेका काष्ठ तथा गैरकाष्ठ प्रजातिको काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उपयोग तथा बजार प्रवद्र्धन गरिने छ ।
नीति २) जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण लगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने ।
(क) जैविक विविधता र स्रोत तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने ।
(ख) वन अतिक्रमण नियन्त्रण गरी अतिक्रमणमा परेको क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने ।
(ग) वन क्षेत्रको जग्गा विकल्प हुँदासम्म अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध नगराउने र विकल्प नभएको अवस्थामा उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने ।
(घ) वातावरणीय सेवाको भुक्तानीको लागि उपयुक्त कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) उपयुक्त प्रणाली विकास गरी वन सम्पदाको आर्थिक मूल्याड्ढन (Economic Valuation) पद्धति स्थापित गर्ने ।
(च) जैविक विविधताको संरक्षणमा स्थानीय एंव परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोग गर्ने ।
(१) वन, वन्यजन्तु, वनस्पति तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरिने छ ।
(२) नेपालको कुनै पनि जैविक विविधता र जैविक स्रोतहरु नष्ट हुन नदिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(३) वनस्पति र वन्यजन्तु प्रजाति तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणका लागि लक्षित संरक्षित क्षेत्रको पहिचान तथा विस्तार गरिने छ ।
(४) जैविक विविधताको संरक्षणको लागि समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्रहरुको विकास र विस्तार गरिने छ ।
(५) दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन (सिमापार जैविक मार्ग समेत) कायम गर्न भू- परिधिस्तरमा संरक्षण तथा व्यवस्थापनको कार्य गरिने छ ।
(६) जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगबीच सन्तुलन कायम गरी स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पु¥याइने छ ।
(७) संकटापन्न, दुर्लभ, लोपोन्मुख वनस्पति र वन्यजन्तुको स्व र पर-स्थानीय संरक्षण गरिने छ ।
(८) महत्वपूर्ण जैविक मार्गको पहिचान गरी संरक्षण गरिने छ ।
(९) चिडियाखानाको स्थापना एवं विस्तार गरिने छ ।
१०) वनस्पति र वन्यजन्तु सम्बद्ध परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास र प्रविधिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गरिने छ ।
(११) टुहुरा, घाइते र समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको लागि उद्धार केन्द्र र वन्यजन्तुको उपचार केन्द्रको स्थापना र विस्तार गरिने छ ।
(१२) पर्या÷पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय वनमा तोकिएका प्रजातिका वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन, अध्ययन, अनुसन्धान, शिकार तथा उपयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
(१३) वन तथा संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्यावरण मैत्री पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
(१४) मध्यवर्ती क्षेत्रमा समुदायको सहभागितामा जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने छ ।
(१५) चोरी शिकार, अवैध कटानी, अनियन्त्रित वन डढेलो, वन पैदावारको अवैध संकलन, अत्यधिक चरिचरण र मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहभागितात्मक संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।
(१६) वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति, २०६८ को पुनरावलोकन गरी लागू गरिने छ भने अतिक्रमित क्षेत्र पुनः प्राप्त गरी वृक्षारोपण र संरक्षण गरिने छ ।
(१७) जैविक विविधता र स्रोत र संरक्षित वन्यजन्तुको अभिलेख तयार गरी अनुगमन गरिने छ ।
(१८) राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार निर्माणको लागि विकल्प नभएको अवस्थामा वन क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा लिएर मात्र उपलव्ध गराइने छ । यस्तो रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गरी गुमेको वन क्षेत्र स्थापना गर्न उपयोग गरिने छ ।
(१९) वातावरणीय सेवाको पहिचान र भुक्तानीको लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।
(२०) मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र राहत वितरणलाई सरल, प्रभावकारी र फराकिलो बनाइने छ ।
(२१) वन क्षेत्र र वन स्रोत सम्बद्ध परम्परागत दाह संस्कार प्रणालीलाई धर्म, सस्कृति र प्रथाको सम्मान गर्दै उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थित गरिने छ ।
(२२) जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मौजुदा डढेलो व्यवस्थापन रणनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।
(२३) खुल्ला चरिचरन व्यवस्थित गर्दै बँधुवा पशुपालन कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न कृषकलाई वन, वीउ, बिरुवा तथा वृक्षरोपणको निम्ति आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
नीति ३) जल तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको
एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने ।
(क) नदी प्रणालीमा (River Basin) आधारित बृहत् जलाधार क्षेत्रको अवधारणा अनुसार जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्ने ।
(ख) संवेदनशील जलाधारलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी जमिनको उपयुक्तताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने ।
(ग) चुरे, तराई र मधेश क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको एकीकृत रुपमा दिगो व्यवस्थापन गर्ने ।
(घ) सिमसार क्षेत्रको पहिचान, अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(१) भू÷क्षय, बाढी, पहिरो, मरुभूमीकरण तथा नदी नियन्त्रणको लागि जलाधार क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरिने छ ।
(२) प्राथमिकताको आधारमा कार्ययोजना बनाई उपल्लो तथा तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्ध स्थापित हुने गरी जनसहभागितामूलक भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(३) कार्यमूलक अनुसन्धानबाट कम खर्चिलो भू तथा जल संरक्षण र कृषि वन प्रणालीको विकास गरी प्रविधि हस्तान्तरण गरिने छ ।
(४) खाद्य उत्पादन र सुरक्षामा योगदान पुर्याउन वन र कृषि प्रणालीबीच सामञ्जस्य कायम गरी भू-संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(५) चुरे, तराई, मधेश लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राष्ट्रिय भू÷उपयोग नीति अनुरुप वर्गीकरण गरी नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(६) सबै सिमसारको पहिचान तथा वर्गीकरण गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवार निकाय तोकी क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।
(७) सिमसार र सिमसारको जलाधार क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगको लागि सहभागितामूलक ढंगले संरक्षण गरिने छ ।
नीति ४) सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी, मध्यवर्ती सामुदायिक, संरक्षित, धार्मिक लगायतका समुदायद्वारा व्यवस्थित वनलाई पारिस्थितिकीय, आर्थिक र सामाजिक रुपले सक्षम बनाउँदै लाभको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने ।
(क) समुदायद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
(ख) समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको माध्यमबाट वनबाट टाढा रहेका, विपन्न, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र सिमान्तकृत उपभोक्ताको पहुँच बढाउने ।
(ग) समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको दिगो व्यवस्थापन गरेर वन क्षेत्रबाट लिन सकिने लाभ अभिवृद्धि गर्दै सदुपयोगको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने ।
(घ) समूहको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समुदायद्वारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन प्रणालीको सुशासन सुदृढीकरण गर्ने ।
(१) समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया सरलीकृत गरिने छ ।
(२) समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियमित रुपमा तालिम र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(३) समुदायद्वारा व्यवस्थित वनबाट दिगो रुपमा महत्तम लाभ प्राप्तिको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गरिने छ ।
(४) समूहमा प्राप्त आम्दानीलाई वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, विपन्नमुखी कार्यक्रम र सामुदायिक विकास
कार्यमा लगाउने सम्बन्धमा प्राथमिकीकरण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
(५) समुदाय समाहित आदिवासी, जनजाति, दलीत, एकल महिला, विपन्न, अपाङ्गलाई स्रोतको पहुँच र लाभको बाँडफाँडमा अग्राधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।
(६) वन संरक्षण र सामुदायिक विकास कार्यमा समुदाय र स्थानीय निकायबीच सहकार्य स्थापित गरिने छ ।
(७) समुदाय वा स्थानीयस्तरमा रहेको परम्परागत तथा प्रथाजन्य ज्ञान र सीपलाई वन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने छ ।
(८) समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त वन पैदावारको विक्री वितरण प्रक्रियालाई थप न्यायोचित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने छ ।
(९) समुदायमा सुशासन सुदृढीकरणका लागि समूह भित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(१०) समुदायमा आधारित सबै वनको विवरण र गतिविधिको सूचना अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने प्रणालीको विकास गरिने छ ।
(११) समुदायद्वारा व्यवस्थित वनको योगदानबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्राप्त नतिजाको आधारमा समुदायद्वारा व्यवस्थित वन प्रणालीलाई परिमार्जन र विकास गरिने छ ।
नीति ५) निजी क्षेत्रलाई वन विकास तथा विस्तारमा संलग्न गराउँदै वनजन्य उद्यमको
प्रवर्द्धन, उत्पादनको विविधीकरण र बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि र हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
(क) निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा वनको पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
(ख) निजी जग्गामा वनको विकास र विस्तार गरी वन पैदावारको उत्पादन बढाई सहज आपूर्तिको लागि प्रोत्साहित गर्ने ।
(ग) जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
(घ) वनजन्य तथा वन्यजन्तुमा आधारित उद्यमको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
(ङ) सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन गरी वनजन्य उद्योग र व्यवसायको स्थापना, विकास र विस्तारलाई सहजीकरण गर्ने ।
(१) कृषि वन, वनजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन र पर्या–पर्यटन विकासका लागि कवुलियती वनको रुपमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराई निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिने छ ।
(२) चिडियाखानाको स्थापना र वन्यजन्तुको व्यवसायिक पालन, प्रजनन, उपयोग, ओसार पसार, बिक्री वितरण, निकासी तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइने छ ।
(३) वन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी बढाउनका लागि वन विकास कोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ ।
(४) निजी वन दर्ताका लागि प्रोत्साहन गर्दै निजी वनबाट उत्पादन हुने वन पैदावार र निजी जग्गामा भएका रुखको प्रयोग तथा ओसार पसार प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइने छ ।
(५) निजी क्षेत्रलाई निजी वन, वनजन्य उद्यम तथा व्यवसायिक नर्सरी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक प्रविधि, सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।
(६) जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन गरी अन्तिम उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।
(७) वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई काष्ठ र गैरकाष्ठ उद्योगमा वर्गीकरण गरी कच्चा पदार्थ सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराइने छ ।
(८) आर्थिक वन (Economic Forestry) उद्योगका लागि छत्र घनत्व कम भएको वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने छ ।
(९) कम उपयोगमा रहेका तथा व्यवसायिक प्रयोगमा आउन नसकेका काठ प्रजातिको पहिचान गरी मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।
(१०) वन तथा संरक्षित क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा पर्या(पर्यटनको प्रवद्र्धन गरिने छ ।
(११) जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार खेतीमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन अनुसन्धान गरी उपयुक्त खेती प्रविधिको विकास गरी हस्तान्तरण गरिने छ ।
(१२) जडीबुटी तथा वेत बाँस लगायतका गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेती तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्यमको पूर्वाधार निर्माण तथा प्रविधिको उपयोगमा अनुदान दिइने छ ।
(१३) व्यवसायिक प्रयोजनको लागि कवुलियती वन उपलब्ध गराउने मौजुदा प्रावधान र प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी नदी उकास, बगर र वन भित्र रहेका बाँझो पर्ती जग्गालाई उत्पादन क्षमता तथा प्रचलित मूल्यको आधारमा राजश्व लिने व्यवस्था गरिने छ ।
(१४) उच्च मूल्यका, संकटापन्न, दुर्लभ तथा लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पति र जडीबुटीको पहिचान, दिगो सङ्कलन, पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता, प्रविधि विकास, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्न समुदाय तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(१५) जैविक सुरक्षा र व्यापारिक महत्वका जडीबुटीजन्य वनस्पतिको गुणस्तर विश्लेषण, वनस्पतिजन्य स्वस्थ्य (Phytosanitary), प्रमाणीकरण लगायत व्यापार प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिने छ ।
(१६) वनजन्य उत्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्न र प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरिने छ ।
(१७) वातावरणीय सेवाको पहिचान तथा सो को बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(१८) वन क्षेत्रको विकास र वन उद्यम प्रवद्र्धनका लागि निजी, सार्वजनिक र समुदायका बीच सहकार्य र निजी क्षेत्र र समुदायका बीच साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
नीति ६) जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(क) जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation) तथा समानुकूलन (Resilience) गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ख) भू÷उपयोगिताको आधारमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरण मैत्री वन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने ।
(ग) जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न नकारात्मक असरको न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध प्रविधि, आर्थिक स्रोत र क्षमता विकासमा पहुँच बढाउने ।
(१) वन स्रोत र जलाधार व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणसँग आबद्ध हुने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्य गरिने छ ।
(२) स्थानीय ज्ञान, सीप तथा प्रविधि अनुरुप अनुकूलन तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणका उपायको अवलम्बन गर्ने गरी समुदायमा आधारित वन तथा जलाधार व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन मैत्री बनाइने छ ।
(३) वनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत कार्बन सञ्चितिको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने छ ।
(४) वन क्षेत्र तथा वन पैदावारको प्रयोगबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने किसिमका कार्यक्रमलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
(५) कार्बन सञ्चितीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न वन पैदावारको बिक्री तथा प्रयोगबाट प्राप्त राजश्वको निश्चित अंश डढेलो नियन्त्रण लगायतका वन संरक्षणका क्रियाकलापमा लगानी गरिने छ ।
(६) जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रविधिको पहिचान, विकास तथा उपयोग गरिने छ ।
(७) वन व्यवस्थापन योजनालाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन मैत्री बनाउँदै लगिने छ ।
(८) जलवायु परिवर्तनका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको तथा पर्न सक्ने प्रभाव र जोखिमको नियमित अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरिने छ ।
(९) जनसहभागिता जुटाई आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गरी प्रतिकारात्मक तथा उपचारात्मक विधि अपनाई वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम गरिने छ ।ज्ञघ
(१०) रेडप्लसको अवधारणा अनुसार नेपाललाई आर्थिक लगायतका स्रोत प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र र विश्व कार्बन ब्यापारमा संलग्न गराई थप स्रोत जुटाउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
(११) जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदाय एवम् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गरी विपद् तथा जोखिम न्युनीकरणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(१२) वैकल्पिक उर्जा, बायोग्याँस, बायोव्रिकेट, सुधारिएको चुलो, जैविक इन्धन आदिको प्रयोगकर्तालाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने छ ।
नीति ७) वन क्षेत्रमा सुशासन, समावेशीकरण र सामाजिक न्याय प्रवद्र्धनको लागि व्यवस्थापनलाई थप सक्षम बनाउने ।
(क) वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सार्वजनिक संगठनको पुनर्संरचना गरी कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
(ख) वन क्षेत्रका सबै संगठन तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्ने ।
(ग) वन व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने ।
(घ) वन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, समुदाय तथा सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
(ङ) वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप पारदर्शी र आधुनिक बनाउने ।
(च) वन व्यवस्थापनको कार्यमा आवश्यक साधन स्रोत अभिवृद्धि गरी परिचालन गर्ने ।
(छ) वन क्षेत्रको विकासको निमित्त प्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको परिचालन र व्यवस्थापन कार्यलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने ।
(१) वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकाय, योजना तथा कार्यक्रमलाई लैङ्गिक समता, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी हुने गरी पुनर्संरचना गरिने छ ।
(२) वन स्रोतमा आश्रित आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, विपन्न वर्ग, साना किसान, पशुपालक, वन श्रमिक, युवाको जीविकोपार्जन सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि र राजगारीमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(३) पारदर्शिता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिइने छ ।
(४) मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
(५) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखा परेको असमान मापदण्डको समायोजन गरिने छ ।
(६) वन संरक्षणको कार्यमा दूरसम्बेदन, जिपीएस् र विद्युतीय पहिचान पद्धति जस्ता आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी वन व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी लगायत सबै पक्षलाई उत्तरदायी बनाइने छ ।
(७) वन अनुसन्धान र तालिम कार्यक्रमलाई एक अर्काको परिपुरकको रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
(८) कार्यालय, आवास भवन, सवारी साधन, उपकरण आदिको व्यवस्था गरी वन प्रशासनलाई भौतिक सुविधा सम्पन्न बनाइने छ ।
(९) प्रत्येक नागरिकमा वन संरक्षणको महत्व बोध गराई वन संरक्षणमा योगदान पुर्याउन प्रेरित गर्न प्रचार प्रसार र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(१०) वन क्षेत्रको शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(११) वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको कार्यको लागि स्थानीयस्तरमा वन स्वयंसेवक तयार गरी परिचालन गरिने छ ।
(१२) जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा (आगलागि नियन्त्रण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वनजन्य अपराध नियन्त्रण, प्रयोगशाला, वनजन्य उद्योग आदि) संलग्न कर्मचारी तथा श्रमिकको यथोचित पेशाजन्य सुरक्षा र जीवन बिमा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिने छ ।
(१३) वन र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सुराकी भत्ता र दण्ड जरिवानाको निश्चित रकम पुरस्कार स्वरुप उपलव्ध गराइने छ ।
(१४) वन क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन वन प्राविधिक परिषद्को गठन गरिने छ ।
(१५) सशस्त्र वन रक्षक सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी छुट्टै कानून र उपयुक्त संरचना निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।
(१६) वन क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको विकासको लागि जनशक्ति विकास योजना र वन श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
(१७) आधुनिक र वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरी वनको सिमाड्ढन वैज्ञानिक बनाइने छ ।
(१८) वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितीकरण, कार्बन ब्यापार, वन विकास कोष तथा वातावरणीय सेवा भुक्तानी जस्ता माध्यमबाट प्राप्त साधन र स्रोतको परिचालन प्रभावकारी बनाइने छ ।
(१९) वनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिको आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाइने छ ।
(२०) नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा नेपालको प्रतिबद्धता अनुसारका कार्य गर्नका लागि आवश्यक नीति, कानून र कार्यक्रहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
(२१) वन क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कृषि नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति जस्ता वन क्षेत्रसंग सम्बन्ध राख्ने नीति र कार्यक्रमसँग तादम्यता कायम गरिने छ ।
(२२) वैदेशिक सहायतालाई वन क्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने छ ।
(२३) वन क्षेत्रको विकासको लागि प्राप्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनको निम्ति उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
Total Users : 516972